Mepụta Mudry CAP-10 maka FSX - Rikoooo
downloads 17 447
Ihe omuma zuru ezu ma zuo oke, ihe magburu onwe ya add-on ! F-BXHV aeroclub Cap Evolution, LFPT Pontoise-Cormeilles, France The Mudry CAP 10 bụ ọzụzụ ụgbọelu nwere oche abụọ nwere nke izizi na 1970 ma bụrụkwa nke emepụtara na 2010. Ewuru ụgbọelu ahụ site n'aka Piel Super Emeraude ma mụọ dịka onye CP100. Aha gbanwere na CAP 10, CAP maka 'Constructions Aéronautiques Parisiennes'.
Okpu 10 e arụpụtara site Mudry (aha ya mmebe) na Bernay, France, zụtara site okpu Industries nke ahụ ghọrọ onu ire Aircraft. Ịgbaso odida nke onu ire na 2008, ikike na-emepụta ọnwụ sọ e ọdịda ka Dyn'Aviation.
Onye edemede: Samdim Design